सांसद शाही 'बेपत्ता प्रकरण'को छानबिन गर्न जनमोर्चाका सांसद नै विभाजित! :: युवराज श्रेष्ठ :: Setopati
सांसद शाही 'बेपत्ता प्रकरण'को छानबिन गर्न जनमोर्चाका सांसद नै विभाजित!
अस्पतालमा उपचाररत सांसद खिम विक्रम शाही। तस्वीर–कृष्ण थापाको फेसबुकबाट ।
प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने दिन वैशाख १५ गते 'अस्वभाविक' रूपमा सांसद शाही ‘बेपत्ता’ भएका थिए।
सांसद शाहीको कारोना संक्रमणका विषय पनि 'शंकास्पद' रहेको थियो। वैशाख १४ गते एकैदिन लिएको २ वटा स्वाब परीक्षण गर्दा सरकारी ल्याबबाट नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो भने निजी ल्याबबाट पोजेटिभ रिपोर्ट आएको थियो। चरक अस्पतालमा लगेपछि फेरि उनको स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १८, २०७८, ०९:३७:००